Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Tanzania » IZanzibar izosingatha iNgqungquthela Ebalulekile Yokuhlonyiswa Kwabesifazane Kwabase-Afrika
Isithombe sihlonishwa yi-aga2rk evela ku-Pixabay
IZanzibar kulindeleke ukuthi isingathe i-Pan African Women Empowerment Summit (PAWES) ekuqaleni kukaNdasa, okuhloswe ngayo ukuheha abesifazane abaningi base-Afrika ukuthi babambe iqhaza kwezamabhizinisi, ezezimali kanye nobuchwepheshe ukuze bathuthuke e-Afrika.
Imibiko evela kubagqugquzeli be-PAWES eZanzibar ithe umcimbi wokuhlangana kweNgqungquthela uzobeka umfutho wezinyathelo eziwujuqu kanye nokutshalwa kwezimali ukuthuthukisa ukufakwa kwabesifazane kwezomnotho nezezimali e-Afrika.
Umcimbi ophethe ifulegi uthi “I-Africa for Africa Women’s Vision: United Women of Africa ekukhululweni kwezomnotho esimeme.”
I-PAWES ihlelelwe ukwenza imephu yazo zonke izinhlangano ezikhona kanye nezinhlangano zikahulumeni nezizimele ezikhona ngenhloso yokuhlinzeka ngosizo, izinsiza, ezezimali, nokuqeqeshwa kwabesifazane nentsha kulo lonke izwekazi lase-Afrika.
Izophinda futhi idale ukuxhumana ezifundeni nasemazweni analezi zinhlangano ezikhona futhi iqinisekise ukuthi kwakhiwa ukumeleleka okwengeziwe kwabesifazane, okwenza abagqugquzeli kanye nababambiqhaza benze inqubomgomo futhi babe nomthelela ekwabiweni kwezinsiza.
Le Ngqungquthela izophinde ihehe ukuthuthukiswa kohlelo lokufundisa oluxhumanisa abesifazane asebekhulile kwezamabhizinisi abazuze amazinga empumelelo futhi abaqoqe ulwazi oluthe xaxa ukuze babelane nosomabhizinisi besifazane abasafufusa.
Okunye okuhlosiwe okubalulekile ukusetshenziswa kwezimakethe zedijithali ezikhona e-Afrika ukuze kukhangise ngemikhiqizo nezinsizakalo, kuyilapho kuthuthukiswa abesifazane abaningi base-Afrika abangabanikazi nabaqhuba izinkundla ezixhumanisa abahlinzeki nabathengi ezwenikazi ikakhulukazi bese kuthi ngale kwemakethe yomhlaba.
Le Ngqungquthela izophinde ikhuthaze ukusetshenziswa kwengqalasizinda yoLwazi kanye Nobuchwepheshe Bezokuxhumana (i-ICT) njengamathuluzi abalulekile okuxhumana kanye nokwabelana ngolwazi kanjalo nokubamba iqhaza ngenkuthalo ababambiqhaza ababalulekile ekukhishweni kwe-inthanethi efinyeleleka kakhudlwana kanye nokuhlola ukusetshenziswa kwamandla avuselelekayo ukuze gcina lokhu kuxhumana.
I-PAWES 2022 izophinde igxile emibukisweni, ekukhuthazeni ezohwebo nokutshalwa kwezimali, kanye namakilasi aphambili ukuze kuthuthukiswe ukufakwa kwabesifazane kwezomnotho nezezimali, kusho abahleli.
Le Ngqungquthela yezinsuku ezintathu izoba esikhumulweni sezindiza i-Golden Tulip Zanzibar esiqhingini lapho kugxilwe khona kakhulu ekuthuthukisweni kobuholi, ukuqeqesha nokufundisa, kanye noguquko lwezomnotho lapho abesifazane bedlala indima ebalulekile.
The Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika (i-ATB) uphakathi kwabahleli ababalulekile nabaxhasi be-PAWES esihehe ababambiqhaza abavela emazweni angaphezu kuka-21 e-Afrika nangaphandle kwezwekazi okuhlanganisa ne-United States of America.
Njengoba ibhekile endaweni yayo e-Indian Ocean, iZanzibar manje isizibeka endaweni yokuncintisana nezinye izifundazwe eziqhingini kwezokuvakasha kanye namanye amagugu ezinsiza zasolwandle. IZanzibar ibekwe kahle ogwini olusempumalanga ye-Afrika enamasiko nomlando ocebile, amabhishi afudumele oLwandlekazi i-Indian, kanye nesimo sezulu esipholile.
Lesi siqhingi sibone ukukhula okuphawulekayo kwezokuvakasha, nethemba lokuheha abavakashi abengeziwe. IZanzibar idume ngamabhishi ayo, ukudoba olwandle olujulile, i-scuba diving, nokubuka amahlengethwa.
Izindaba eziningi ngeZanzibar
Africa Airport Ulwazi Internet Ubuchwepheshe Ezokuvakasha I-united states Zanzibar
Ukwakha Kabusha Ukuhamba: I-World Tourism Network ibona isikhathi manje
Kusho ukuthini Ukuhamba Okuhle noMariot Bonvoy?
Ukuxhaswa Ngezimali Kwezisetshenziswa ZeCannabis uthi:
Januwari 24, 2022 ngo-04: 51
Ngihlabeke umxhwele ngezinqubomgomo Ezinomthelela ezinikeza abantu abasha amandla okwenza izinto ezinobulungiswa neziqhubekayo. Le thesis ngiyinikezela emndenini wami ngokungeseka kukho konke engikufundayo.